YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, September 08
TTC ၏ ကျောင်းခေါ်ချိန်
နံမည်ကြီးကျောင်းတွေ ကိုထားတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးသိထားရမှာ ကဗိုလ်ချူပ်တစ်ယောက် လက်မှတ်ပါ ရမယ်ဆိုတာပါဘဲ...တော်တော် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတာပါ TTC ကျောင်းဆိုရင် သူငယ်ချင်းရဲ. သမီးလေးက ကျောင်းဝင်ခွင့် ဖောင်မှာ ရှေ. ရောက်ရက်နဲ. မည်သည့် ဗိုလ်ချူပ် လက်မှတ်မှ မပါသည့် အတွက် ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး.....သူတို.နေတာ ကလည်းTTC ကျောင်းနဲ.တော် တော်လေးကို နီးပါတယ်...ဒီကျောင်းဝင်ခွင့် ဖောင်ရဖို. အတွက်လဲ မနက်၃နာရီ လောက်ထဲက သွားပြီးတန်းစီရတာပါ....ပညာရေးစနစ်ရဲ. အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံး ကျောင်းအပ်တဲ့ အချိန်မှာ တောင်ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုများ ကောင်းလာနိုင်ပါတော့ မလဲ...ကျောင်းဝင်ခွင့် ထုတ်ပြန်တဲ့ နေ.မှာဘဲ..ကျောင်းအပ်ချင်ရင် ပေါက်ဈေးက သိန်းအစိတ် ပါတဲ့....
TTC ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးကျောင်းကြီးကတော့ ကျောင်းမှ တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဆင်ပြေကြသော သူများ၊ တစ်ချို့သောလူကြီးး၏သားသမီးမြေးများသည်TTC ကျောင်းတွင် အများသူဌာကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျောင်းတက်နေချိန်တွင် နေ့စဉ်ကျောင်းလာရောက်တက်ရန်မလိုပါပဲ နာမည်နှင့် စာရင်းသာTTC ကျောင်းတွင်ရှိ၍အင်္ဂလိပ်ကျောင်းများတွင်သာသွား
ရောက်တက်နေနိုင်ပြီး သာမာန်ဝန်ထမ်းသားသမီးများကတော့ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက်တောင် ခွင့်ယူရန်မလွယ်ကူကြပါဘူး။
နှစ်စဉ်အချိန်တန်လျှင် နေ့စဉ်ကျောင်းပုံမှန်တက်ခဲ့ရသောကလေးများကဲ့ သို့ပင် တစ်နှစ်တစ်တန်းအောင်မြင်သွားကြပြီး ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ကျောင်းလာတက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါပဲ မြန်မာပြည်၏GRADE 11 ကိုအောင်မြင်စွာဖြေဆိုပြီး တပြိုင်ထဲ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှလည်း အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ကာ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပညာသင်သွားကြပါတယ်။
အဲတော့ ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့ ခွင့်(၁ဝ)ရက်ခန့်တင်ပြီး အလည်အပတ်သွားတာတောင် နိုင်ငံခြားတွင်ကျောင်းသွားတက်သလား ၊ဘာလားနှင့် အမျိုးမျိုး ပြသာနာရှာခံကြရပြီး နှစ်စဉ်ကျောင်းမတက်ပါပဲ တစ်နှစ်တစ်တန်းအောင်မြင်နေသော သူများကိုတော့ မသိသလိုပဲနေနေကြပါတယ်တဲ့ ။
ခွင့်တရားဝင်တင်ပြီး ခဏ နိုင်ငံခြားကိုအလည်ရိုးရိုး (၁ဝ ) ရက်သွားမိတဲ့ ကလေးကိုတော့ ပတ်စပို့တွေ မိတ္တူကူးတင်ခိုင်းပြီး နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်တာမှလား။အဆင်မပြေလို့ပြန်လာတာမှလား။အခုအဲလိုဆိုကျောင်းထုပ်မယ်ဘာညာနဲ့ ခေါ်တွေ့ပြီး ပြသာနာရှာ ကျိန်းဝါးပြောဆိုခံရပါတယ်တဲ့။
ဒ့ါပေမယ့်မြန်မာပြည်တွင်း မှာတင် ကျောင်းတွင် စာရင်းသာရှိပြီးကျောင်းလာမတက်ပဲ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသာတက်နေတဲ့ ကလေးမျိုးတွေ ကိုတော့ ဘာလို့ အဲလိုမပြောတာလဲဆိုတာတော့...../
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/08/20090အကြံပြုခြင်း
The Arakan Naioanl Newspaper Vol.3 No.8 August, 2009
Voice of Burma (5 September Issue)
စက်တင်ဘာလ၂၇ရက် (၁ဝး၃ဝ) ချိန်ခန့် ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့ဘက်မုခ် အလယ်ပစ္စယံတွင် သံဃာ (၁ဝဝ) ပါး စုစည်းလျက်ရှိ။ ရဲတပ်ရင်းများ ကွပ်ကဲမှုညွှန်ကြားရေးမှူး ရဲမှူးချုပ်သန်းဟန်ဦးစီးပြီး လုံခြုံရေးတပ်ခွဲ(၁)ခွဲဖြင့် အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နေရာအား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့။ သံဃာများသည် လမ်းကြောင်းပိတ်၍ အုပ်စုဖွဲ့ နေလျက်ရှိရာ ရဲမှူးချုပ်သန်းဟန်မှ သံဃာများအား ယခုလုပ်ရပ်သည် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော သာသနာဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်မှု ဖြစ်သည့်အပြင် ပုဒ်မ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီး အခြေအနေကိုလည်း ကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ပါ၍ အေးချမ်းစွာ မိမိကျောင်းများသို့ ပြန်ကြစေရန်(၃) ကြိမ်ခန့် ပင့်ဆောင်ရာ သတ္တိရှိစွာ လိုက်နာမှု မရှိကြပါ။
(၁၁း၁၅)ချိန်တွင် အလုံမြို့နယ် ဆင်မင်းရပ်ကွက် အလုံလမ်းရှိ ဇဗ္ဗူရတနာကျောင်းတိုက်မှ သံဃာ (၄၂) ပါးသည် အာဇာနည်လမ်းအတိုင်း တပ်မတော် ဓမ္မာရုံ၊ ပြန်ကြားရေး ဓမ္မာရုံကြား ရှိ ပိုက်လုံးလမ်းမှ ကြားတောရလမ်း ၊ ၄င်းမှ ကြေးသွန်းဘုရားရှေ့သို့ (၁၂းဝဝ) ချိန် ရောက်ရှိပြီး အလယ်ပစ္စယံမှ ဆင်းလာသော သံဃာများနှင့် ပူးပေါင်းသဖြင့် စုစုပေါင်း သံဃာ ၃ဝဝ၊ လူ ၃ဝဝခန့် ရှိလာခဲ့ ။
(၁၂း၁ဝ) ချိန်မှစ၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ စွမ်းအားရှင်များ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များမှ လူစုခွဲရန်နှင့် အေးချမ်းစွာ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအသီးသီးသို့ ပြန်ကြရန် အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထားသော်လည်း မရပါ။ (၁၂း၂ဝ) ချိန်တွင် လုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ စတင်လုံးထွေးဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ကပ်လျက်ရှိသော သံဃာများလည်း မဟာအောင်မြေဘုံကျောင်း အတွင်းသို့ ပြေးဝင်သွားခဲ့။
(၁၂း၃၅) ချိန်တွင် ကျောင်းအတွင်းသို့ ပြေးဝင်သွားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ အုတ်ခဲများ၊ ၊သားရေဂွများ ၊တုတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အနီးကပ် အန္တရာယ်ပြု လက်နက်လုယူရန် ၂ ကြိမ်တိုင် အင်အားဖြင့် ချဉ်းကပ် ထိုးဖောက်မှုကြောင့် လူအုပ်စုအတွင်းသို့ မျက်ရည်ယိုဗုံး ( ၉ ) လုံး ပစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့။
(၁၂း၅ဝ) ချိန်ခန့်တွင် လူ (၃ဝဦး) နှင့် သံဃာ (၂ဝ) ခန့်သည် ကြားတောရလမ်းရှိ ကျောင်းအတွင်းသို့ ပြေးဝင်သွားပြီး ကျန်သံဃာများနှင့် လူများသည် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံနှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းဘက်သို့ လူစုခွဲ ထွက်ခွာသွားခဲ့ ။ ဖြစ်စဉ်တွင် အောက်ပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့။
(က) ရတရ (၁) ရင်းမှူး ဒုရဲမှူးကြီးသက်လွင် ဝဲဘက် မျက်ခုံး တစ်လက်မခန့်ကွဲ ။
လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဆန္ဒပြသူများအား ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ည (၁၂း၄၅) ချိန်ထိ ကျား (၁၂၂) ဦး။ မ (၂၅) ဦး ။ ပေါင်း (၁၄၇) ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသား (NHGADKMJI) အသက် ၅၅နှစ် ခန့်ရှိ ပစ်စ်ပို့ အမ်အက်စ် ဝဝ၂၂၂ဝဝဝ ဓါတ်ပုံသမား ကျား(၁) ဦးမှာ ယာဘက်ဝမ်းဗိုက်အောက် ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
(၁၅းဝဝ) ချိန်တွင် ရတခမရ၁ဝ၁ စက၁/၂နှင့် ခွဲ၎ခွဲသည် အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းအတိုင်း တောင်မှ မြောက်သို့ ထွက်ခွာလာစဉ် လူအင်အား (၁ဝဝဝဝ) ခန့်မှ အဆာဟိမှန်ဆိုင်ရှေ့တွင် မှန်ကြီးများထည့်သည့် သစ်သားဘောင်များဖြင့် လမ်းအား ပိတ်ဆို့ တားဆီးထားသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ ရပ်တန့်ပြီး အတူ လိုက်ပါလာသည့် ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူး အေးသန်းမှ လက်ကိုင်အသံချဲ့စက်ဖြင့် လူစုခွဲရန် ၃ ကြိမ် ပြောခဲ့သော်လည်း လူစုကွဲမသွားသောကြောင့် ပိတ်ဆို့ထားသည့် သစ်သားတန်းများအား ဖယ်ရှားပြီး လူစုကွဲရန် မီးခိုးဗုံး ၃လုံး ပစ်ခတ်ခဲ့သော်လည်း လူအုပ်စုကွဲသွားခြင်း မရှိသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် ၈ချက်ခန့် မိုးပေါ်ထောင်ဖောက်ခဲ့ ။
(၁၄း၃ဝ) ချိန် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ရုံလမ်းအတိုင်း ချီတက်လာသော လူထုအင်အား (၁ဝဝဝ) ခန့်သည် နိုင်ငံတော်အလံ လွင့်ထူ၍ ခွပ်ဒေါင်းအလံ ၁ခု ကိုင်ဆောင်ပြီး ကျိုက္ကဆံလမ်းအတိုင်း ချီတက် လာခဲ့ရာ ကျောက်မြောင်းမီးပွိုင့် တာမွေလမ်း သျှင်ပါကူဆေးခန်းရှေ့၊ တာမွေငါးခွဆုံ မီးပွိုင့်တို့ကို ဖြတ်၍ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းအတိုင်း ဆက်လက် ချီတက်လာရာမှ (၁၅းဝဝ) ချိန် အထက (၃) တာမွေ ရှေ့သို့ ရောက်ရှိခဲ့။
အနီးကပ် ဝင်ရောက်လုံးထွေးသော ဆန္ဒပြသူများအား ရာဘာဗုံးပစ်လောင်ချာဖြင့် ဖြိုခွင်းခဲ့ရသဖြင့် အမျိုးသား အမည်မသိ ၁ဦး ၂၇ နှစ်သည် ရာဘာဗုံးသီး ထိမှန် သေဆုံးသွားခဲ့။ (၁၆း၁၅) ချိန် တောင် ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သစ္စာလမ်းနှင့် ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်တွင် ဆူပူဆန္ဒပြလှုပ်ရှားသူ လူထုအင်အား (၂ဝဝဝဝ) ခန့်သည် ဝေဇယန္တာ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်သို့ သုမင်္ဂလာလမ်းမှ တစ်ဆင့် သစ္စာလမ်းအတိုင်း ချီတက် လာသဖြင့် ရတခမရ ၇ဝ၂ စက ၁ နှင့်ခွဲ၂ခွဲ ၊ မြောက်ပိုင်း ခရိုင် ခယက ဥက္ကဌဦးစီး စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တို့မှ ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့။ လူစုခွဲရန် အကြိမ်ကြိမ်သတိပေး တားမြစ်သော်လည်း ရပ်တန့်မှုမရှိဘဲ ပိတ်ဆို့ ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်နေသော လူထုအတွင်း ကျွံဝင်သွားသည့် မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေး စစ်သည်များ၏ လက်နက်ငယ်များအား ဝိုင်းဝန်းလုယက်သည်အထိ တင်းမာလာခဲ့။
၁၆း၁၅) ချိန် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သစ္စာလမ်းနှင့် ဝေဇယန္တာပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်အနီး ဝေဇယန္တာနှင့် သစ္စာလမ်းဆုံရာတွင် ဆန္ဒပြဆူပူလှုပ်ရှားသူ လူထုအင်အား(၂ဝဝဝဝ) ခန့်သည် ဆန္ဒပြနေစဉ် ရတခမရ ၇ဝ၂ စက ၁ နှင့် ခွဲ၂ခွဲ၊ မနရတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူ့စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တို့မှ ပိတ်ဆို့ တားဆီးခဲ့။ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ခယကဥက္ကဌ ဦးစီးအဖွဲ့မှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် လူစုခွဲရန် အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ဆန္ဒပြ အဖွဲ့သည် လူစုခွဲခြင်းမရှိပဲ မိမိလခရတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ခဲ၊တုတ်၊များဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီး လူအင်အားဖြင့် ဝင်ရောက်လုံးထွေး ရန်ကြိုးပမ်းစဉ် စွမ်းအားရှင်များမှ ပြန်လည်ရိုက်နှက် လူစုခွဲ ထိန်းသိမ်းရာမှ ဆန္ဒပြသူ ၁ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့။
၂ဝဝ၇ စက် ၃ဝဝ၆ဝဝချိန်တွင် သက်နိုင်ဦး ၃ဝနှစ် (ဘ) ဦးအုန်းမြင့် တိုက် ၄ အခန်း (ဝဝ၂) ယုဇနမြို့တော်(ABlock)တွင် နေထိုင်သူ စက်၂၉၁၂ဝဝချိန် အနော်ရထာလမ်းနှင့် ဆူးလေမီးပွိုင့်၌ ဖမ်းဆီးရမိသူသည် ကျိုက္ကဆံ ယာယီထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွင် အိပ်ရာထရန် နိုးစဉ် ပြင်ပဒဏ်ရာမရှိဘဲ သေဆုးုံလျက်ရှိ။ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ ၃ဝရက် (၁၅း၃၅) ချိန်တွင် အင်းစိန် GTC ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၌ ဦးသန်းအောင် ၄၃နှစ်(ဘ) ဦးတင်မောင်အေး အမှတ်၉၂၈ အင်းဝလမ်း ၆ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် နေသူသည် စိတ်ဝေဒနာ လက္ခဏာပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်စဉ် (ဝ၈းဝဝ) ချိန်တွင် လမ်း၌ သေဆုံးသွားခဲ့။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ တရားဝင်ရပ်တည်နေသော နိုင်ငံရေးပါတီများအားစည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင်ပြုရေး ကို ယနေ့ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“ ဘ၀ရဲ့တိုက်ပွဲ ”
8 September News
၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉
စက်တင်ဘာလ သံဃာအရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် နအဖ၏ အစီရင...
သခင်တင်မြ သို့မဟုတ် မိမိ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ဘယ်ခေတ်ကို မဆို သစ္စာ &